UMseleku uthi ufuna unkosikazi wesihlanu | News24
UMseleku uthi ufuna unkosikazi wesihlanu
Durban – Uthi ufihle induku emqubeni ngokuthatha unkosikazi wesihlanu usomabhizinisi osematheni kulezi zinsuku kulandela ukuvela ohlelweni lwakhe lokuqala kumabonakude olubizwa ngokuthi uThando Nesithembu kuMzansi Magic.
UMusa Mseleku okuqale ukukhonjiswa kwalolu hlelo lwakhe ngoLwesine uphenduke undabizekwayo ezinkundleni zokuxhumana abantu bezwakalisa imibono yabo, iningi labesifazane likhombise ukumthanda kakhulu.
“Nakuba ngingumuntu ongaxgilile kakhulu ezinkundleni zokuxhumana kodwa okwenzekile ngesikhathi kudlala uhlelo nangemuva kwalo kungithusile kakhulu,” esho ezwakalisa ukuthi usamangele.
Uthi okummangaza ngempela abesifazane abamthumelela imiyalezo bezibika kuye: “Okuhlekisa kakhulu wukuthi abanye bebezibika nakumakhosikazi ami,’ kusho uMseleku obuye abe ngumbhali wezincwadi.
Utshele leli phephandaba ukuthi nakuba iningi labesifazane belizicelela ukuba yinkosikazi yesihlanu kodwa okwamanje akazimisele ukuphawula ngokuthi uzothatha eyesihlanu inkosikazi.
“Engingakusho nje wukuthi ngifihle induku emqubeni ngakho ngeke ngikwazi ukuphawula ngalokho okwamanje,” esho.
Thola udaba oluphelele kwi-LANGA LangeSonto.